Wararka Maanta: Talaado, Dec 4 , 2012-Dagaal khasaare geystay oo Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-shabaab ku dhexmaray deegaan ku dhow Jowhar
Dagaalka ayaa qarxay kaddib markii xoogagga Al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen ciidamada dolwadda, iyadoo dagaalkan uu noqonayo kii ugu cuslaa oo gobolka Shabeellada dhexe ku dhexmara ciidamada dowladad iyo Xarakada Al-shabaab.
Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabo, Asad Qaasim ayaa sheegay in 13 dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabaab ay ku dileen dagaalka oo muddo saacado ah socday, isagoo sheegay in dhankooda uu kaga dhintay hal askari laba kalena ay kaga dhaawacmeen. Inkastoo Al-shabaab aysan weli ka hadlin weerarkii ay ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
"Xoogagga Al-shabaab ayaa nasoo weeraray 3:00 habeenimo ee xalay, dagaalkuna wuxuu socday muddo saacado ah, dhankeenna waxaa nooga dhintay hal askari, laba kalena way nooga dhaawacmeen, inatii aan aragnayna 13 Al-shabaab ah ayaa naftooda ku waayay goobta," ayuu yiri Qaasim.
Goobjoogayaal ku sugan deegaanka lagu dagaalmay ayaa sheegay inaysan jirin cid shacabka ah oo dagaalkii xalay wax ku noqotay, dagaalkuna uu deegaankooda ka dhacay, ayna arkeen markii uu dagaalku dhammaaday maydadka sideed ka mid ah dhinacyadii dagaalamay oo dhintay.